Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Mexico » Cancun fizahan-tany: herisetra ataon'ny andian-jiolahy, famonoana olona, ​​fanendahana fiara, sakafo misy poizina, herisetra ara-nofo ary polisy mitam-piadiana
Ny fampitandremana maika momba ny fitsangatsanganana an-tanàn-dehibe any Mexico, anisan'izany i Cancun sy Riveria Maya no ezaka farany nandrisihana ny mpizahatany hieritreritra in-droa alohan'ny handehanana any Mexico. Ny mpitandro ny filaminana mirongo nify dia mifehy ny morontsiraka sy toeram-pizahan-tany malaza any Cancun sy Riveria Maya, Mexico. Vitan'izy ireo ve ny misoroka ireo tranga maro isan'ny herisetra ataon'ny andian-jiolahimboto, fitifirana amin'ny alika amam-borona, alikaola tsy mahomby, fanapoizinana ara-nofo, fanafihana ara-nofo, polisy sandoka, fandrobana fiara fitateram-bahoaka, fakana an-keriny ary fakana ankeriny?
Niharatsy ny toe-draharaha ny departemantam-panjakana amerikana ary ny biraon'ny raharaham-bahiny britanika dia nametraka fampitandremana ho an'ny amerikana sy mpitsidika britanika.
Mandeha eo afovoan'ny ady mahery setra ny mpizahatany. Mety ho lasibatry ny fotoana rehetra izy ireo. Afaka nahita vavam-basy izy ireo ary tsy maintsy niady tamin'ny zava-mahadomelina alikaola ary norobaina na iharan'ny herisetra ara-nofo. Na ny fandehanana any amin'ny fitoeram-bola aza dia mila manana ny fahaizanao momba anao ianao satria misy mpanendaka manodidina.
Meksika manokana ny toeram-pialantsasatra Cancun sy Riveria Maya dia toerana fialantsasatra malaza ho an'ny anglisy sy amerikana.
Ireo mpandraharaha mpizahatany toa an'i TUI dia nanosika azy ireo ho "toerana azo antoka" satria i Brits dia manalavitra ireo firenena toa an'i Frantsa noho ny loza mety hitranga amin'ny fampihorohoroana. Saingy miaraka amin'ilay laza vaovao hita vaovao dia mipoitra ny tsy fahatokisan-tena sy herisetra rehefa miady hifehy ny varotra zava-mahadomelina mahaliana ny mpizahatany.
Ny birao raharaham-bahiny britanika dia nanavao ny pejy toro-hevitra momba ny dia mba hanehoana an'ity onjan'ny heloka bevava mitohy ity.
Voalaza ao hoe: “Olana lehibe any Mexico ny asan-dahalo sy herisetra ary mety hampidi-doza ny vahiny ny toe-javatra azo antoka. Tsy tokony handeha mandritra ny ora antoandro fotsiny ianao. ”
Klioba fandihizana iray any Playa Del Carmen maty am-polony ao amin'ny toeram-pialantsasatra ao Cancun, ao anatin'izany ny mpivarotra amoron-dranomasina fizahan-tany rehefa nilentika ireo vahiny taitra.
Olona roa ihany koa no voatifitra tao anaty fiantsonan'ny fiara fiantsenana feno entana tamin'ny volana septambra raha tavela kosa ny lohany tapaka teo amin'ny arabe iray be olona akaikin'ny banky.
Famonoana olona 129 mahery no voasoratra anarana ao amin'ny faritanin'i Quintana Roo hatramin'ny volana septambra izay nahitana 13 mahery tao anatin'ny iray volana.
Ny talen'ny fizahan-tany ho an'ny Cozumel sy ny birao fizahan-tany Riviera Maya dia nilaza fa efa nisy hetsika manokana nanomboka ny volana aogositra, ary nanampy hoe: "Mitohy ny fisian'ny hery federaly sy eo an-toerana. Mifantoka amin'ny faritra fizahan-tany izy ireo ary maharitra ny fisian'izy ireo. "
Mampitandrina ihany koa ny torohevitra farany momba ny fanendahana sy ny fanafihana ataon'ireo mpamily fiarakaretsaka tsy nahazo alalana ary koa nilaza fa “aza avela hisy sakafo na zava-pisotro tsy misy mpiambina ao amin'ny trano fisotroana sy fisakafoanana. Mpangalatra no norobaina na iharan'ny herisetra rehefa avy nodi-drongony “.
Manoro hevitra ihany koa izy ireo ny hampiasana ATM amin'ny “ora antoandro” noho ny loza mety hitranga amin'ny fanafihana ary mampitandrina ihany koa ny amin'ny fakana ankeriny an-keriny izay terena haka vola avy amin'ny carte de crédit-ny ireo traboina mba hahazoana antoka ny famotsoran'ny mpiara-miasa.
Nisy ihany koa ny filazalazana momba ny fanararaotana ara-nofo ireo mpizahatany tao amin'ny toeram-pivarotana tao Riveria Maya izay misy ifandraisany amin'ny alikaola maloto ary koa ny fahafatesan'olona.
Ny governemanta amerikana dia nandray ny dingana tsy mahazatra amin'ny famoahana fampitandremana ho an'ny mpandeha momba ny booze dodgy ary i TripAdvisor koa dia nirehitra noho ny fanesorana ireo toerana izay notondroin'ny mpanao fialantsasatra ny fanafihana tao amin'ny toeram-pialantsasatra ao Cancun sy Riviera Maya.
Mila mitandrina ihany koa ny mpizahatany amin'ny fiantsoana taxi Uber satria ny orinasa taxi ao an-toerana dia mirotsaka an-tsehatra amin'ny fampitahorana amin'ny app app.
Izany dia efa nahita ny mpamily nanafika ary ny sasany nihazakazaka teny amin'ny arabe ary nanafika tamin'ny baseball